Ma ii sheegi kartaa habka ugu wanaagsan ee aad ugu adeegsan karto boggaaga si waxtar leh?
Hoosta waxaan isku dayi doonaa inaan daboolo qaybaha ugu muhiimsan ee dallacsiinta internetka si ay kaaga caawiso inaad dareentid kalsooni oo aad bilawdo habka ugu fiican ee xayeysiiskaaga internetka laga bilaabo bilowga. Ka hor intaan wax kale jirin, aynu ka bilowno qawaaniinta aasaasiga ah ee ku dhow dhow ololaha casriga ee casriga casriga ah. Ama sida dhabta ah ma aha xeer ama tilmaamo, laakiin kaliya hal taxaddar fudud, si sax ah u noqoto. Iska ilaali soo-booqdayaashaada bogga qiimaha oo dhan. Habkaas, si fiican ayaad u diri lahayd bogga soo degaya oo gaar ah oo loo qaabeeyey si ay ula kulanto suurtogalnimada waxkasta oo xayeysiis ah ee mashruucaaga internetka - gemeinde dinhard entsorgung affoltern.
Laakiin ma jiraa habka ugu wanaagsan ee lagu xayeysiin karo boggaaga? Ku samaynta bogga cirifka leh ee codka leh! Fikrad ahaan, waa inaad haysatid boggaaga soo degaya oo ku xiran waxyaabo gaar ah iyo waxyaabo gaar ah, kuwaas oo aad macaamiishaada rabta inay rabaan inay arkaan khibradooda, tusaale ahaan, dukaankaaga internetka.
Sidaa darteed, sida loo qaabeeyo bog cusub oo soo degaya habka ugu wanaagsan ee loogu xayeysiiyo boggaaga internetka waxtarka ugu sarreeya? Inaad haysato qodobbada saxda ah leh meeleyn ku habboon oo ku taal boggaaga soo degaya! Aan eegno oo dhan, talaabo talaabo tallaabo ah. Hoos waxaa ku qoran waxaan ku qorayaa sheeko gaaban oo ku saabsan qof kasta si aad ugu kala hormariso shaqooyinkaaga boggaga degelka.
Sawirro waxaa loo baahan yahay 76% iibsadaha (ku saleysan sahan dhawaan). Xaqiiqadan waxaa dib u xaqiijiyay Google oo sii kordhinaya muuqaalka muuqaalka ah ee aan ku muujinnay SERPs. Iyada oo tixgelineysa in qaybta libaaxa ee dukaamada ay si fiican uga jawaab celinayso muuqaalka muuqaalka, waxaan ku talineyaa halkan adigoo isticmaalaya waxyaabaha soo socda ee boggaaga soo degaya: liiska alaabada, calaamadaha calaamadaha, iyo ogaysiisyada kala duwan, sida qiimaha qiimaha, qiimaha wax soo saarka, calaamadaha digniinta, iwm.
Dib u eegis sheyga ayaa loo baahan yahay qiyaastii 70% dukaamada. Sidaa darteed, hal gacan, waxay noqon laheyd fikrad wanaagsan in la helo dib u eegis macaamiil joogta ah oo lagu martiqaaday boggaaga laftiisa. Laga soo bilaabo dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ku darto dib u eegisyada PPC iyada oo loo marayo kordhinta khadka tooska ee internetka ee la heli karo ee furan.
Isbarbardhiga tartan ee badeecadaada ama adeeggaaga ka dhanka ah kuwa ka soo horjeeda hoggaamiyeyaashu waxay doonayaan qiyaastii 45% dukaamada. Isbarbardhigga isbarbardhiga ah ee isbarbar dhigo boggaga soo degaya ee garaafka ama dukumiintiga si aad ugu oggolaato booqdayaashaada inay akhriyaan xog qiimo leh oo sahlan, iyo habka ugu dabiiciga ah ee suurtogalka ah.
Tijaabooyinka ay ka tagaan macaamiishii hore waxay doonayaan 40% iibiyeyaasha. Ka dhigista boggaaga dhulka ayaa noqon karta habka ugu wanaagsan ee lagu xayeysiiyo boggaaga internetka haddii uu jiro isbeddel isha ku haysa alaabtaada si aad uga soo hor jeeddo dadka ka soo horjeeda suuqa.
La sheekaysiga la-taliyaha dal-ku-dhiska waa WAA INAAD ku saabsan bogga soo degaya. Waxaan aaminsanahay inaan loo baahneyn in liiska lagu qoro wax kasta oo la qiyaasay, sida muuqata in sheygani si toos ah loogu martiqaado boggaaga soo degida ayaa noqon doona habka ugu wanaagsan ee lagu xayeysiiyo boggaaga internetka, badanaa markaad ka shaqeyneyso warshadaha dukaamaysiga ee macaamil kasta oo suurtagal ah inuu badanaa qabo su'aalo badan si aad u weydiiso.